FAQs - Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
Afaka mitsidika anao ve aho?
Azo antoka fa tongasoa ny fitsidihanao.
Ahoana no ahazoana ny orinasao?
Fiantsonan'ny lalamby: Xiamen & Xiamen Avaratra & Jinjiang & Quanzhou
Fiara adiny 1 eo ho eo.
Seranam-piaramanidina: Xiamen & Jinjiang
Fiara 50 minitra amin'ny fiara.
Ahoana no hahazoako ny vidiny?
Ny vidiny dia mifototra amin'ny QTY, fe-potoana fandoavam-bola, fotoana fandefasana.
Ahoana ny vidiny?
Izahay no mpanamboatra fa tsy mpivarotra ka afaka mahazo ny vidiny sy ny kalitaony mahafinaritra ianao.
Ahoana ny fametrahana baiko?
Fanontaniana - hadihadio ny pitsopitsony momba ny masinina — fanamarihana –haingoana fanamafisana sy fifanarahana — fandoavam-bola mialoha ho an'ny orinasa — ampahafantaro ny mpanjifa — fifandanjana karama
—Mampifandray kaontenera famandrihana sambo — fitoeran-kaontenera — ampahafantaro ny antontan-taratasy rehetra vita
antontan-taratasy tany am-boalohany — nandefa antontan-taratasy ho an'ny mpanjifa tamin'ny alàlan'ny Express — mampahafantatra ny mpanjifa ary manaraka ny fanarahana — aorian'ny fampahafantaran'ny mpanjifa ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Momba ny fanamboarana
Horaisina an-tsitrapo ny mpiara-miombon'antoka ODM / OEM.
Ahoana no fomba ahazoana modely mety indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana?
Azafady mba lazao anay hoe inona no hataonao amin'ilay milina, dia hahita ny maodely mety indrindra miaraka amin'ny vidiny mifaninana aminao izahay. (Inona ny fitaovana hanapahana na ny sokitra? Ary inona ny haben'ny Max vita amin'ny sary sokitra? Ny sary sokitra ve no tena ataonao? tapahina? Raha tapaka, inona ny Max. fanapahana hatevinao?)
Azoko atao ve ny mifampiraharaha amin'ny vidin'ny milina?
Eny, mety handinika fihenam-bidy lehibe amin'ny habetsaky ny volabe isika.
Ahoana ny fametrahana ny masinina?
Matetika ny fametrahana azy dia tokony hataon'ny injeniera Joborn, raha tsy izany dia tokony hanana ny fahefana nomen'i Joborn ny mpanjifa ary hanaraka tsara ny torolalana.